Ambondrona Lasa fanariam-pako ny elakelan-trano
Asa na vokatry ny coronavirus izay niteraka ny fihibohana na fanararaotana tsotra izao hoy ireo mponina eny Ambondrona misy ireo elakelan-trano maro samihafa fa lasa kamo manary fako eny amin’ny daban-jaoridira napetraky ny kaominina ny mponina sasany eny an-toerana.
Any amin’ireo elakelan-trano talaky ny masony avokoa izy ireny no manary ny fakony hany ka tsy vitsy ireo mponina manakaiky izany no difotry ny fofona sy hitangoronan’ny lalitra. Tsy ny aretina coronavirus intsony indray no atahorana hankarary ireo mponina eny an-toerana araka izany fa ny loto. Raha araka ny fitarainan’ireo mponina hatrany dia efa nisy ny tatitra nataon’izy ireo teny anivon’ny sefo Fokontany ary eo am-piandrasana izay mety ho vokany izy ireo. Ankoatra izay dia nitaraina ihany koa ireto mponina ireto fa tsy nisy asa fanadiovana faobe intsony teny amin’ny faritra nisy azy tato ho ato. Raha tsiahivina anefa dia ny asa fanadiovan-tanana no tokony tena imasoana amin’izao fotoana handalovan’ny coronavirus eto amintsika izao hahafahana mamono ilay tsimok’aretina tsy hiparitaka.